वाम गठबन्धन VS कांग्रेस गठबन्धन : कुन क्षेत्रमा कोसँग प्रतिस्पर्धा ? (हेर्नुहोस् सूची) « Deshko News
वाम गठबन्धन VS कांग्रेस गठबन्धन : कुन क्षेत्रमा कोसँग प्रतिस्पर्धा ? (हेर्नुहोस् सूची)
आसन्न मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ३७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभातर्फ ७४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन हुन लागेको हो ।
आगामी निर्वाचन मुख्यतः एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन र कांग्रेस सहितको साना दलको कांग्रेस गठबन्धनबीच हुने देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि भोजपुरमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार सुदन किराँती र कांग्रेस गठबन्धनका उमेशजंग रायमाझीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । माओवादी नेता रहेका किरातीलाई एमालेले सघाउने छ भने कांग्रेस नेता रहेका रायमाझीलाई संघीय समाजवादी फोरमले सघाउने छ ।
त्यस्तै खोटाङमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विशाल भट्टाराई र कांग्रेस उम्मेदवार सरस्वती बजिमयबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यहाँ एमाले नेता भट्टाराईलाई माओवादीले सघाउँदैछ ।
त्यस्तै ओखलढुंगामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार यज्ञराज सुनुवार र कांग्रेसका रामहरी खतिवडाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा सुनुवार र खतिवडा दुबै ओखलढुंगाबाट निर्वाचित भएका थिए ।
सोलुखुम्बुमा वाम गठबन्धनबाट हेमकुमार राई र कांग्रेसबाट वलबहादुर केसीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
ताप्लेजुंगमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमाले पार्टी सचिव योगेश भट्टराई र कांग्रेसका केशव दाहालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
संखुवासभामा वाम गठबन्धनबाट एमाले नेता राजेन्द्र गौतम र कांग्रेसबाट दीपक खड्काबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
पाचँथरमा वाम गठबन्धनका बसन्तकुमार नेम्वाङ र कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
प्रदेश नं ३ का ६ वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । यहाँ पनि वाम गठबन्धन र कांग्रेस गठबन्धनबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
रामेछापमा वाम गठबन्धबाट माओवादीका श्यामकुमार श्रेष्ठ उम्मेदवार बनेका छन् भने उनलाई एमालले सघाउँदैछ । त्यस्तै कांग्रेबाट कान्छाराम तामाङ उम्मेदवार बनेका छन् । यहाँ श्रेष्ठ र तामाङबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ ।
दोलखामा वाम गठबन्धनबाट एमाले केन्द्रिय सदस्य पार्वत गुरुङ रकांग्रेसबाट रुद्र खड्का चुनावी मैदानमा छन् ।
रसुवामा बाम गठबन्धबाट एमाले नेता जनार्दन ढकाल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् भने कांग्रेस गठबन्धनबाट उम्मेदवारको टुंगोे लाग्न सकेको छैन् ।
सिन्धुपाल्चोक १ मा वाम गठबन्धनको उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन भने कांग्रेस गठबन्धनबाट मोहनबहादुर बस्नेत प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक २ मा वाम गठबन्धनबाट माओवादी नेता अग्नि सापकोटा र कांग्रेस गठबन्धनबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता पशपतिसमशेर राणाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
नुवाकोट १ मा वामगठबन्धनबाट माओवादी नेता हितबहादुर तामाङ र कांग्रेस गठबन्धनबाट डा. रामशरण महतबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । त्यस्तै नुवाकोट २ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका नारायण प्रसाद खतिवडा र कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीबीच भिडन्त हुँदैछ ।
धादिङमा वाम गठबन्धनबाट एमालेका भूमि त्रिपाठी र कांग्रेस गठबन्धनका विश्व अर्यालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । धादिङ २ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका खेम लोहनी र कांग्रेसका दिलमान पाख्रिनबीच भिडन्त हुने देखिन्छ ।
प्रदेश नं ४ को ६ वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचनु हुँदैछ । मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी र बाग्लुङमा निर्वाचन हुन लागेको हो । यहाँ पनि वाम गठबन्धन र कांग्रेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
लमजुङमा वाम गठबन्धनबाट माओवादी नेता देव गुरुङ निर्वाचनमा होमिएका छन् भने कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती चुनावी मैदानमा छन् ।
मनाङमा एमालेका पाल्देन छोपाङ गुरुङ वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने कांग्रेसबाट टेकबहादुर गुरुङ उठेका छन् ।
मुस्ताङमा वाम गठबन्धनबाट प्रेमबहादुर तुलाचन एमालेको तर्फबाट टिकट लिएका छन् भने कांग्रेसबाट मुस्ताङको फाइनल भएको छैन् ।
गोरखा १ र २ निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनबाट माओवादीले टिकट पाएको छ भने १ मा हरि अधिकारी र कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठबीच प्रतिस्र्धा हुँदैछ ।
त्यस्तै २ मा वामगठबन्धनबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
म्याग्दीमा भुपेन्द्रबहादुर थापा वाम गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा छन् भने कांग्रेसका खम्बीर गर्बुजा प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।
बाग्लुङ १ मा वाम गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले टिकट पाउने भएको छ भने कांग्रेसबाट चम्पादेबी खड्काले टिकट पाएकी छन् । त्यस्तै वाग्लुङ २ मा माओवादीका देबेन्द्र पौडेलले टिकट पाएका छन् भने कांग्रेसबाट निरज पुन चुनावी मैदानमा देखिएका छन् ।
प्रदेश नं ५ मा दुईवटा जिल्लामा मात्र चुनाव हुँदैछ । राल्पा र रुकुमको पूर्वि भागमा निर्वाचन हुन लागेको हो । रोल्पामा माओवादी नेता बर्षामान पुन र कांग्रेसका अमरसिंह पुनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
रुकुमको पूर्वि भागमा माओवादीबाट कमला रोका र कांग्रेसबाट गोपालजीजंग शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
प्रदेश न.६ मा सातवटा जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ । रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
रुकुम पश्चिम भागमा माओवादी नेता जनार्द शर्मा चुनावी मैदानमा छन् भने कांग्रेसका वीरबहादुर ओली चुनावी मैदानमा देखिएका छन् ।
जाजरकोटमा वाम गठबन्धनका शक्तिबहादुर बस्नेत र कांग्रेसका राजिवविक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
हुम्लामा वाम गठबन्धनका चीमी लामा र कांग्रेसका मंगल शाहीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
जुम्लामा माओवादीका गजेन्द्र महत र कांग्रसका देवेन्द्र शाहीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
मुगुमा एमालेका गोपाल बम र कांग्रेसका हस्तबहादुर मल्लबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
कालिकोटमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका भुपेन्द्रबहादुर शाहीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
डोल्पामा एमालेका धनबहादुर बुढा र कांग्रेसा अंगद बुढाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
प्रदेश नं ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र वैतडीमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । दार्चुलामा वाम गठबन्धनबाट एमालेका गणेश ठगुन्ना र कांग्रेसका विक्रम सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
बभाङमा एमालेका भैरबबहादुर सिंह र कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै बाजुरामा एमालेका लालबहादुर थापा र कांग्रेसका कविराज पण्डित प्रतिस्पर्धा गर्देछन् ।
र, वैतडीमा बामगठबन्धनबाट एमाले नेता दामोदार भण्डारी छन् भने कांग्रेसका नरबहादुर चन्दले भण्डारीको सामना गर्देछन् ।